Ozi nchekwa data, ojiji kuki na nkwuputa - www.amp-cloud.de
Data nchedo, kuki & liability
Gbanwee ntọala nchedo data:
Jiri bọtịnụ na-esonụ iji mepee ederede ederede na ojiji nke kuki, nke ị nwere ike iji gbanwee ntọala nchebe data metụtara.
Gbanwee ntọala maka ojiji kuki
Nchedo data na ileba anya:
Ozi ndị a na-enye nkọwa dị mfe nke ihe na-eme data onwe gị mgbe ị gara na weebụsaịtị anyị. Data nkeonwe bụ data niile eji amata gị. Enwere ike ịchọta nkọwa zuru ezu banyere isiokwu nke data na nkwupụta nchebe data anyị edepụtara n'okpuru ederede a.
Nchịkọta data na weebụsaịtị anyị
Onye na-ahụ maka nnakọta data na weebụsaịtị a?
Nhazi data na webụsaịtị a ka onye ọrụ webụsaịtị na-arụ. Nwere ike ịchọta nkọwa kọntaktị ha na akara nke weebụsaịtị a.
Kedu ka anyị si anakọta data gị?
N'otu aka, a na-achịkọta data gị mgbe ị gwara anyị ya. Nke a nwere ike ịbụ data ị banyere n'ụdị kọntaktị, dịka ọmụmaatụ.
Ndị ọzọ na-edekọ data ndị ọzọ na usoro IT anyị na-akpaghị aka mgbe ị gara na weebụsaịtị. Nke a bụkarịrị teknụzụ (dịka ihe nchọgharị internetntanetị, sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ oge nke ihu peeji). A na-anakọta data a na akpaghị aka ozugbo ị banyere na weebụsaịtị anyị.
Kedu ihe anyị ji data gị maka?
Nwere ikike ịnata ozi gbasara mbido, onye nnata na ebumnuche nke data echekwara gị n'efu n'oge ọ bụla. I nwekwara ikike ịrịọ mmezi, igbochi ma ọ bụ ihichapụ data a. Nwere ike ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla na adreesị enyere na ọkwa iwu ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara isiokwu nchekwa data. I nwekwara ikike itinye mkpesa gị n'aka onye nlekọta nlekọta tozuru etozu.
Ihe nyocha na ngwa ndi ozo
Mgbe ị gara na webụsaịtị anyị, enwere ike ịtụle etu ị na-eme sọfụ. A na-ejikarị kuki eme ihe na mmemme nyocha. A na-enyochakarị omume ị na-eme sọọfụ na-enweghị aha; Agaghị achọta omume agagharị. Nwere ike ịjụ nyocha a ma ọ bụ gbochie ya site na iji ụfọdụ ngwaọrụ. Nwere ike ịchọta ozi zuru ezu na nke a na nkwupụta nchedo data na-esonụ.
Nwere ike ịjụ nyocha a. Anyị ga-agwa gị gbasara ohere ịjụ na nkwupụta nchekwa data a.
General ozi na amanyere bụ iwu:
Ndị na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ a na-echedo data nkeonwe gị nke ọma. Anyị na-emeso data nkeonwe gị na nzuzo yana dịka usoro iwu nchekwa data dị na nkwupụta nchekwa data a.
Mgbe ị na-eji weebụsaịtị a, a na-achịkọta data nkeonwe. Data nkeonwe bụ data nke ị nwere ike iji aka gị mata. Nkwupụta nchedo data a na-akọwa ihe data anyị na-anakọta na ihe anyị ji ya. Ọ na-akọwakwa otu esi arụ ya na ebumnuche ya.
Anyị ga-achọ ịkọwa na ịnyefe data na ịntanetị (dịka mgbe ị na-ekwurịta okwu site na e-mail) nwere ike ịnwe oghere nchekwa. Nchedo zuru oke nke data ahụ maka ịnweta site n'aka ndị ọzọ agaghị ekwe omume.
Rịba ama na ahụ ọrụ
Isi ọrụ maka nhazi data na weebụsaịtị a bụ:
Ahụ ọrụ dịịrị bụ onye okike ma ọ bụ onye iwu nke naanị ya ma ọ bụ ya na ndị ọzọ, na-ekpebi ebumnuche na usoro nhazi data nkeonwe (dịka aha, adreesị email, wdg).
Nwepu nkwenye gị na nhazi data
Ọtụtụ arụmọrụ nhazi data ga-ekwe omume naanị nkwenye nkwenye gị. You nwere ike ịdọrọ nkwenye gị n'oge ọ bụla. Ozi email anyị na-ezighi ezi ezuola. Iwu nke nhazi data emere tupu iwepu ya emetụtaghị nkwụghachi.
Ikike nke ịrịọ ndị nlekọta na-elekọta ọrụ
Ikike iji nweta data
Have nwere ikike ịnwe data anyị na-ahazi na akpaghị aka dabere na nkwenye gị ma ọ bụ na mmezu nke nkwekọrịta enyere gị ma ọ bụ ndị ọzọ na usoro nkịtị, nke nwere ike ịgụta igwe. Ọ bụrụ n ’ịrịọ maka inyefe onye ọzọ ọrụ data ahụ n’aka onye ọzọ kpatara ya, a ga-eme nke a ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Ozi, igbochi, nhichapụ
N'ime usoro nke usoro iwu dị, ị nwere ikike ịhapụ ozi gbasara data nkeonwe gị echekwara, onye mbido ha na onye nnata ha na ebumnuche nke nhazi data yana, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ikike iji dozie, igbochi ma ọ bụ hichapụ data a. Nwere ike ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla na adreesị e nyere na ọkwa iwu ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara isiokwu gbasara data nkeonwe.
Jectionjụ ozi mgbasa ozi
Anyị na-ajụ ugbu a iji ojiji nke kọntaktị data bipụtara na ọnọdụ nke ọrụ akara maka izipu mgbasa ozi na ihe ọmụma na-achọghị. Ndị na-arụ ọrụ nke ibe ahụ nwere ikikere iji iwu kwadoro ma ọ bụrụ na ezigaraghị ozi mgbasa ozi, dị ka ozi ịntanetị spam.
Nchịkọta data na weebụsaịtị anyị:
Offọdụ ibe ntanetị na-eji kuki akpọrọ. Kuki anaghị emebi kọmputa gị ma enweghị virus. Kuki na-eme ka onyinye anyị nwekwuo mmekọrịta ndị ọrụ, na-arụ ọrụ ma dị nchebe. Kuki bụ obere faịlụ ederede echekwara na kọmputa gị ma chekwaa ihe nchọgharị gị.
Imirikiti kuki anyị na-eji bụ nke a na-akpọ "kuki nnọkọ". A na-ehichapụ ha na-akpaghị aka mgbe ị gachara. Kuki ndị ọzọ na-anọgide na-echekwa na ngwaọrụ gị ruo mgbe ihichapụ ha. Kuki ndị a na-enyere anyị aka ịmata ihe nchọgharị gị mgbe ọzọ ị gara.
Nwere ike ịtọ ihe nchọgharị gị ka e wee mee ka ị mara maka ntọala kuki ma nye naanị kuki n'ọnọdụ ọ bụla, ewepu nnabata kuki maka ụfọdụ ikpe ma ọ bụ n'ozuzu, ma rụọ ọrụ nhichapụ kuki na-akpaghị aka mgbe ị mechiri ihe nchọgharị ahụ. Ọ bụrụ na agbanyụọ kuki, enwere ike igbochi ọrụ nke weebụsaịtị a.
A na-echekwa kuki ndị achọrọ iji rụọ ọrụ nkwukọrịta kọmputa ma ọ bụ iji nye ụfọdụ ọrụ ịchọrọ (dịka ọrụ ụgbọ ibu azụmahịa) dabere na Art. 6 Paragraf 1 lit. Onye na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ nwere ezigbo mmasị na ịchekwa kuki maka teknụzụ na-enweghị njehie na nke kachasị nke ọrụ ya. Dika echekwara kuki ndi ozo (dika kuki maka ichoputa omume igwu mmiri gi), a gha elebara ha anya iche na nkwuputa nchedo data a.
Kuki kuki "oru"
Kuki na "Ọrụ" na-arụ ọrụ zuru oke ma dị mkpa maka ịrụ ọrụ weebụsaịtị ma ọ bụ iji mejuputa ụfọdụ ọrụ. Ya mere, a gaghị agbanyụ ndị na-enye ụdị a.
ndị na-enye ọrụ
Kuki kuki "ojiji"
Kuki na otu "Ojiji" sitere na ndị na-enye ọrụ na-enye ụfọdụ arụmọrụ ma ọ bụ ọdịnaya, dị ka ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta, ọdịnaya vidiyo, mkpụrụ edemede, wdg. Ndị na-enye ụdị a na-emetụta ma ihe niile dị na peeji ọrụ ọfụma. .
Kuki kuki "mmesho"
Kuki sitere na "Mmesho" ụdị sitere na ndị na-enye ọrụ nwere ike nyochaa ohere ịnweta weebụsaịtị (n'amaghị aha, n'ezie). Nke a na-enye nnyocha banyere arụmọrụ weebụsaịtị na otu esi eto. Site na nke a, enwere ike nweta ihe, dịka ọmụmaatụ, iji melite saịtị ahụ ogologo oge.
Kuki nke "ego"
Kuki sitere na otu "Ego" si n'aka ndị na-eweta ọrụ ndị ọrụ ha na-akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ na akụkụ nke weebụsaịtị na-enye. Nke a na-akwado ịdị adị nke weebụsaịtị.
Ihe ndekọ sava sava
Onye na-eweta weebụsaịtị na-anakọta ma na-echekwa ozi na faịlụ ndekọ ihe nkesa na-akpọ, nke ihe nchọgharị gị na-enyefe anyị na-akpaghị aka. Ndị a bụ:
Wsdị ihe nchọgharị na ụdị ihe nchọgharị
Ọbịa aha nke ịnweta kọmputa
Oge nke ihe nkesa na-arịọ
Agaghị ejikọ data a na isi mmalite data ndị ọzọ.
Edere data a dabere na Art. 6 Paragraf nke 1 lit. f GDPR. Onye na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ nwere ezigbo mmasị na ngosipụta nke enweghị njehie na njikarịcha nke weebụsaịtị ya - a ga-edekọ faịlụ ndekọ sava maka nke a.
Mgbasa mgbasa ozi:
Facebook plugins (dị ka & share button)
Ihe mgbakwunye nke netwọk mmekọrịta Facebook, onye na-eweta Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, ka ejikọtara na ibe anyị. Nwere ike ịmata ntanetị Facebook site na akara Facebook ma ọ bụ bọtịnụ "Dị ka" na weebụsaịtị anyị. Nwere ike ịchọta nchịkọta nke plugins Facebook ebe a: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Mgbe ị gara na weebụsaịtị anyị, nkwụnye ahụ na-eweta njikọ dị n'etiti ihe nchọgharị gị na sava Facebook. N'ihi ya, Facebook na-enweta ozi ị rutere na saịtị anyị na adreesị IP gị. Ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ Facebook "Dị ka" mgbe ị banyere n'ime akaụntụ Facebook gị, ị nwere ike jikọta ọdịnaya nke ibe anyị na profaịlụ Facebook gị. Nke a na-enyere Facebook aka ịbịanye ọbịbịa gị na weebụsaịtị anyị na akaụntụ njirimara gị. Anyị ga-achọ ịkọwapụta na, dị ka onye na-eweta ibe ndị ahụ, anyị enweghị ihe ọmụma banyere ọdịnaya nke data ezigara ma ọ bụ ojiji nke Facebook. Nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na nke a na nkwupụta nchedo data Facebook na: https://de-de.facebook.com/policy.php
Ọ bụrụ n'ịchọghị ka Facebook nwee ike ekenye gị nleta anyị na webụsaịtị gị na akaụntụ ndị ọrụ Facebook gị, biko pụọ na akaụntụ ọrụ Facebook gị.
Google ngwa mgbakwunye
Ibe anyi ji arụ ọrụ Google+. Onye na enye gi bu Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Nchịkọta na mgbasa ozi: You nwere ike iji bọtịnụ Google bipụtara ozi n'ụwa niile. Gị na ndị ọrụ ndị ọzọ na-enweta ọdịnaya nkeonwe sitere na Google na ndị mmekọ anyị site na bọtịnụ Google+. Google na-echekwa ozi ị nyere + 1 maka ọdịnaya na ozi gbasara ibe ị lere mgbe ịpịrị +1. Enwere ike igosi +1 gị dị ka ihe ngosi yana aha profaịlụ gị na foto gị na ọrụ Google, dị ka nsonaazụ ọchụchọ ma ọ bụ na profaịlụ Google gị, ma ọ bụ n'ebe ndị ọzọ na weebụsaịtị na mgbasa ozi na ịntanetị.
Google dekọtara ozi gbasara ihe omume gị + 1 iji melite ọrụ Google maka gị na ndị ọzọ. Iji nwee ike iji bọtịnụ Google+, ị ga-achọ ọhụụ zuru ụwa ọnụ, profaịlụ Google ọha na eze nke ga-enwerịrị opekata mpe aha ahọrọ maka profaịlụ. A na-eji aha a eme ihe na ọrụ Google niile. Mgbe ụfọdụ, aha a nwekwara ike dochie aha ọzọ ị jiri mgbe ị na-ekekọrịta ọdịnaya site na akaụntụ Google gị. E nwere ike igosi ndị ọrụ maara adreesị email gị ma ọ bụ ndị nwere ozi njirimara ndị ọzọ gbasara gị njirimara nke profaịlụ Google gị.
Ojiji nke ozi anakọtara: Na mgbakwunye na ebumnuche ndị edepụtara n'elu, a ga-eji ozi ị nyere dịka usoro iwu nchekwa data Google dị. Google nwere ike bipụta nchịkọta ọnụ ọgụgụ gbasara ihe omume 1 nke ndị ọrụ ma ọ bụ nyefee ya ndị ọrụ na ndị mmekọ, dịka ndị mbipụta, ndị mgbasa ozi ma ọ bụ weebụsaịtị ejikọtara.
Ngwa nyocha na mgbasa ozi:
Weebụsaịtị a na-eji ọrụ nke ọrụ nyocha weebụ Google Analytics. Onye na enye gi bu Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Nchịkọta Google na-eji ihe ndị a na-akpọ "kuki". Ndị a bụ faịlụ ederede echekwara na kọmputa gị ma na-enyere gị aka iji weebụsaịtị ahụ nyochaa. A na-ebufe ozi nke kuki ahụ maka ojiji nke weebụsaịtị a na sava Google na USA ma chekwaa ebe ahụ.
Ihe nchekwa nke kuki Google Analytics di na Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Onye na - ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ nwere ezigbo mmasị n'ịtụle omume onye ọrụ iji bulie weebụsaịtị ya na mgbasa ozi ya.
Anyị arụgoro ọrụ anonye ọrụ IP na weebụsaịtị a. N'ihi nke a, Google ga-ebelata adreesị IP gị n'ime mba ndị so na European Union ma ọ bụ na steeti ndị ọzọ na-eme nkwekọrịta nke Agreement na European Economic Area tupu enyefe ya na USA. A ga-eziga adreesị IP zuru ezu na sava Google na USA ma belata ebe ahụ n'okwu ndị ọzọ. Na nnọchite onye ọrụ nke weebụsaịtị a, Google ga-eji ozi a iji nyochaa ojiji nke weebụsaịtị, iji kpokọta akụkọ banyere ọrụ weebụsaịtị yana iji nye ndị ọrụ webụsaịtị ọrụ ndị ọzọ metụtara ọrụ weebụsaịtị yana ịntanetị. Adreesị IP nke ihe nchọgharị gị na-ebute dị ka akụkụ nke nchịkọta Google agaghị ejikọta na data Google ndị ọzọ.
Ihe mgbochi megide nnakọta data
Nwere ike igbochi nchịkọta Google site na ịnakọta data gị site na ịpị bọtịnụ dị n'okpuru. Nke a na-egosi ozi na nhọrọ ntọala maka ojiji kuki, site na ịpị "" ị gbanyụọ, tinyere ihe ndị ọzọ, nchịkọta data gị na akaụntụ Google Analytics anyị:
Gosi nhọrọ iji gbanyụọ nchịkọta Google
Nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara otu Google Analytics si ejikwa data onye ọrụ na iwu nzuzo Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Hazie nhazi data
Anyị ejiri nkwekọrịta Google kwubie nkwekọrịta nkwekọrịta data na nkwekọrịta ma mejuputa iwu siri ike nke ndị nwe obodo nchebe data German mgbe ị na-eji Google Analytics.
Njirimara igwe mmadụ na Google Analytics
Weebụsaịtị a na-eji ọrụ "njirimara igwe mmadụ" nke Google Analytics. Nke a na-enye ohere ịmepụta akụkọ nwere ozi gbasara afọ, okike na ọdịmma nke ndị ọbịa na saịtị ahụ. Ihe data a sitere na mgbasa ozi nwere mmasị sitere na Google yana site na data ndị ọbịa sitere na ndị na-eweta ndị ọzọ. Enweghị ike ịnye data ndị a na mmadụ. Can nwere ike ịkwụsị ọrụ a n'oge ọ bụla site na ntọala mgbasa ozi dị na akaụntụ Google gị ma ọ bụ na-amachibido nchịkọta data gị site na Google Analytics dị ka akọwara na ngalaba "Objụ nchịkọta data". Weebụsaịtị a na-eji ọrụ "omume igwe mmadụ" nke Google Nchịkọta. Nke a na-enye ohere ịmepụta akụkọ nwere ozi gbasara afọ, okike na ọdịmma nke ndị ọbịa na saịtị ahụ. Ihe data a sitere na mgbasa ozi nwere mmasị sitere na Google yana site na data ndị ọbịa sitere na ndị na-eweta ndị ọzọ. Enweghị ike ịnye data ndị a na mmadụ. Can nwere ike ịkwụsị ọrụ a n'oge ọ bụla site na ntọala mgbasa ozi dị na akaụntụ Google gị ma ọ bụ na-amachibido nchịkọta data gị site na Google Analytics dị ka akọwara na ngalaba "jectionjụ nchịkọta data".
Weebụsaịtị a na-eji Google AdSense, ọrụ maka ijikọ mgbasa ozi sitere na Google Inc. ("Google"). Onye na enye ya bu Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google AdSense na-eji ihe a na-akpọ "kuki", faịlụ ederede na-echekwa na kọmputa gị na-enye ohere nyocha nke ojiji nke weebụsaịtị. Google AdSense na-ejikwa ihe a na-akpọ mgbama weebụ (eserese ndị a na-adịghị ahụ anya). Enwere ike iji mgbama weebụ ndị a iji nyochaa ozi dịka okporo ụzọ ndị ọbịa na ibe ndị a.
A na-ebufe ozi nke kuki na mgbama weebụ maka ojiji weebụsaịtị a (gụnyere adreesị IP gị) na nnyefe nke usoro mgbasa ozi na sava Google na USA ma chekwaa ebe ahụ. Google nwere ike inyefe ya na ndị mmekọ na Google. Agbanyeghị, Google agaghị ejikọta adreesị IP gị yana data ndị ọzọ echekwara gbasara gị.
Nchekwa nke kuki nke AdSense dabere na Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Onye na - ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ nwere ezigbo mmasị n'ịtụle omume onye ọrụ iji bulie weebụsaịtị ya na mgbasa ozi ya.
You nwere ike igbochi nwụnye kuki site na ịtọlite ihe nchọgharị gị na ya; agbanyeghị, anyị ga-achọ ịkọwa na n’okwu a ị gaghị enwe ike iji ọrụ niile nke weebụsaịtị a n’uju ha. Site na iji weebụsaịtị a, ị na-ekwupụta na ị kwenyere na nhazi nke data anakọtara site na Google n'ụzọ akọwara n'elu na maka ebumnuche edepụtara n'elu.
Ngwa na ngwaọrụ:
Peeji a na-eji mkpuru edemede web, nke Google nyere, maka ihe ngosi edo edo. Mgbe ị na-akpọ elu peeji, ihe nchọgharị gị na-ebu ihe ntanetị weebụ achọrọ n'ime ihe nchọgharị gị iji gosipụta ederede na ederede n'ụzọ ziri ezi.
Maka nke a, ihe nchọgharị ị na-eji ga-ejikọrịrị na sava Google. Nke a na - eme ka Google mara na abanyela weebụsaịtị anyị site na adreesị IP gị. Ojiji nke Google Web Fonts bụ maka mmasị nke edo edo na ngosi ngosi nke onyinye anyị n'ịntanetị. Nke a na-anọchi anya ezi mmasị dị n'ime ihe Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.
Ọ bụrụ na ihe nchọgharị gị anaghị akwado mkpụrụ akwụkwọ weebụ, akara ngosi ọkọlọtọ ga-eji kọmputa gị.
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na Google Web Fonts na https://developers.google.com/fonts/faq na nkwupụta nchedo data Google: